ဘောလုံးလောကရဲ့ လှပတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေထဲက တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား – Sports A2Z
ဘောလုံးလောကရဲ့ လှပတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေထဲက တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား
၂၀၁၉ တုန်းက လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ဥရုဂွေးနိုင်ငံသား ဂိုးသမား ကီဗင် ဒေါ်ဆန်ကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း ပလာဇာ ကိုလိုနီယာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ၁-၀ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ပေးဂိုးမဲ့ နိုင်ပွဲကိုပါ ဖန်တီးယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ချီးကျူးစရာလုပ်ရပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ပွဲအတွက် အောင်ပွဲခံရမယ့်အစား ပင်ညာရိုးလ်အသင်းရဲ့ ဂိုးသမားက ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် အခိုက်အတန့်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့အသင်းဖော်တွေနဲ့ ပလာဇာ ကိုလိုနီယာကစားသမားတွေက အဝတ်လဲခန်းဘက် ဦးတည်ပြီးသွားနေခဲ့ချိန်မှာ ဒေါ်ဆန်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ ဘယ်သူမှ ထင်မထားခဲ့မျိုး ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဥရုဂွေးသားက သူ့ပြိုင်ဘက်အသင်းက ဒေါင်းန်ရောဂါကြောင့် မွေးရာပါ အသိဉာဏ်ချို့ယွင်းချက်ရှိနေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး ပင်နယ်တီကန်ဖို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်သလို သူကတော့ ဂိုးစောင့်ပေဖို့ အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြောခဲ့သလို စကားတွေ အပြန်အလှန်ပြောပြီး ဂိုးရှေ့ကို ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ။
This goalkeeper from Uruguay has proven it really does cost $0 to be kind 🥰 pic.twitter.com/QQ6U0AtkxC
— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) July 24, 2021
အဲ့ဒီပရိသတ်အနေနဲ့တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပင်နယ်တီကန်ချက်ကို ကန်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတွေပါ သဘောကျလောက်မယ့် အထာမျိုးနဲ့ ဘောလုံးတည်ခဲ့သလို ဂိုးသမားရဲ့ ညာဘက်ထောင့်ကို ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒေါ်ဆန်အနေနဲ့ ခန့်မှန်းတဲ့ဘက် မှန်ခဲ့ပေမယ့် မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘဲ ဂိုးပေးလိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီပရိသတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ တကယ့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတွေ အောင်ပွဲခံသလို ထောင့်ကန်အလံတိုင်နားပြေးပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့သလို လူမှုကွန်ယက်တွေမှာလည်း အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်က နာမည်ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်မိသူတွေ ကြည်နူးသွားစေမယ့် အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ။
ဒေါ်ဆန်ကတော့ အဲ့ဒီပရိသတ်အတွက် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် အခိုက်အတန့်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး သူ့အပေါ်ချီးကျူးမှုတွေကလည်း ထိုက်တန်ခဲ့သလို ပင်နယ်တီကန်ချိန်မှာ တကယ့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလို ဝီစီမှုတ်ပြီး ကန်ဖို့ အချက်ပြခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင်ကလည်း ချီးကျူးထိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
That wasadamn good kick – even by professional standards.
Made me tear up. The ref blowing the whistle. The goal keeper’s full extension to block and the kid’s celebration at the end.
Only thing that would’ve been better would’ve beenalouder roar from the crowd.
— Mavelous (@FashionMaven88) July 24, 2021
ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့ အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပြီး လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ ကြင်နာမှုဆိုတာ ငွေကြေးတစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ပြသလို့ ရတယ်ဆိုတာကို နမူနာအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးသွားခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားရဲ့ နှိမ့်ချတတ်တဲ့ အပြုအမူနဲ့ ဂရုတစိုက်ရှိမှုအပေါ် တွစ်တာမှာ ရေးသားဂုဏ်ပြုနေကြကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
ZAWGYI: ၂၀၁၉ တုန္းက လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံသား ဂိုးသမား ကီဗင္ ေဒါ္ဆန္ကေတာ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚမွာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခုေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕အသင္းေဟာင္း ပလာဇာ ကိုလိုနီယာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ကစားခဲ့တဲ့ပြဲမွာ ၁-၀ နဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ေပးဂိုးမဲ့ ႏိုင္ပြဲကိုပါ ဖန္တီးယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ပြဲမွာ ခ်ီးက်ဴးစရာလုပ္ရပ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ပြဲအတြက္ ေအာင္ပြဲခံရမယ့္အစား ပင္ညာ႐ိုးလ္အသင္းရဲ႕ ဂိုးသမားက ပရိသတ္တစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္မယ့္ အခိုက္အတန႔္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူ႔အသင္းေဖာ္ေတြနဲ႔ ပလာဇာ ကိုလိုနီယာကစားသမားေတြက အဝတ္လဲခန္းဘက္ ဦးတည္ၿပီးသြားေနခဲ့ခ်ိန္မွာ ေဒၚဆန္ရဲ့ လုပ္ရပ္ကေတာ့ ဘယ္သူမွ ထင္မထားခဲ့မ်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။
ဥ႐ုေဂြးသားက သူ႔ၿပိဳင္ဘက္အသင္းက ေဒါင္းန္ေရာဂါေၾကာင့္ ေမြးရာပါ အသိဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနတဲ့ ပရိသတ္တစ္ေယာက္ကို ေခၚၿပီး ပင္နယ္တီကန္ဖို႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာျဖစ္သလို သူကေတာ့ ဂိုးေစာင့္ေပဖို႔ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့သလို စကားေတြ အျပန္အလွန္ေျပာၿပီး ဂိုးေရွ႕ကို ေခၚေဆာင္သြားခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီပရိသတ္အေနနဲ႔ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပင္နယ္တီကန္ခ်က္ကို ကန္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေဘာလုံးသမားေတြပါ သေဘာက်ေလာက္မယ့္ အထာမ်ိဳးနဲ႔ ေဘာလုံးတည္ခဲ့သလို ဂိုးသမားရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္ကို ကန္သြင္းႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ေဒါ္ဆန္အေနနဲ့ ခန႔္မွန္းတဲ့ဘက္ မွန္ခဲ့ေပမယ့္ မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ ဂိုးေပးလိုက္ရပါတယ္။
အဲ့ဒီပရိသတ္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြေရွ႕မွာ တကယ့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေဘာလုံးသမားေတြ ေအာင္ပြဲခံသလို ေထာင့္ကန္အလံတိုင္နားေျပးၿပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့သလို လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာလည္း အဲ့ဒီျဖစ္ရပ္က နာမည္ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၾကည့္မိသူေတြ ၾကည္ႏူးသြားေစမယ့္ အခိုက္အတန႔္ေလးပါပဲ။
ေဒါ္ဆန္ကေတာ့ အဲ့ဒီပရိသတ္အတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္မယ့္ အခိုက္အတန႔္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး သူ႔အေပၚခ်ီးက်ဴးမႈေတြကလည္း ထိုက္တန္ခဲ့သလို ပင္နယ္တီကန္ခ်ိန္မွာ တကယ့္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလို ဝီစီမႈတ္ၿပီး ကန္ဖို႔ အခ်က္ျပခဲ့တဲ့ ကြင္းလယ္ဒိုင္ကလည္း ခ်ီးက်ဴးထိုက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဘာလုံးပရိသတ္ေတြကေတာ့ အဲ့ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ၾကၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ ၾကင္နာမႈဆိုတာ ေငြေၾကးတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မကုန္ဘဲ ျပသလို႔ ရတယ္ဆိုတာကို နမူနာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်တတ္တဲ့ အျပဳအမူနဲ႔ ဂ႐ုတစိုက္ရွိမႈအေပၚ တြစ္တာမွာ ေရးသားဂုဏ္ျပဳေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။
ဘလွန်ဒေါကို တုန်လှုပ်စေမယ့် ကိန်း၊ စောင့်ကြည့်သူ CR7 နဲ့ ထိုက်တန်သူ မက်ဆီတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲ
အာဆင်နယ်ဖန်တွေ သဘောတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ သောမတ်စ် ပါတေးရဲ့ အကွက်လေး
အက်ဇ်ပလီကွေတာက အချိုးမပြေလို့ တံတောင်နဲ့တမင်တွတ်တာ...
Analysis • International • La Liga • Ligue1 • Premier League
၂၀၂၁ ရဲ့ ဘယ်လွန်ဒေါဆုကို မက်ဆီရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက် ၅...
Analysis • International • La Liga • Other Leagues • Premier League • Serie A
တရုတ်ပြည်မှာ လစာမြင့်မြင့်နဲ့ ဂျင်းသွားထည့်ခဲ့ကြတဲ့...
ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပေါ်တူဂီ ရေနစ်နေချိန်မှာ...
နောက်ဆုံးမိနစ်တွေမှာ နှစ်ဂိုးသွင်းပြီး နော်ဝေနဲ့...
Analysis • International • Premier League
ဟာရီကိန်းရဲ့ စံချိန်တွေနဲ့ ဆန်မာရီနို 0-10...